Umyalelo Wokuqala - Uhlalutyo kunye nokuchazwa
Unqulo & Umoya IiNkolelo zeNkolelo
Umyalelo Wokuqala: Uze Ungabi Naluphi na UThixo Ngaphambi Kwam
Uhlalutyo lweMithetho elishumi
Umyalelo Wokuqala ufunda:
UThixo wathetha onke la mazwi, esithi, NdiyiNkosi uThixo wakho, eyakukhupha ezweni laseYiputa, endlwini yobukhoboka. Ungabi ngabanye oothixo phambi kwam. ( Eksodus 20: 1-3)
Umyalelo wokuqala, oyintloko kunye nomyalelo obalulekileyo-okanye ngaba yimithetho emibini yokuqala? Ewe, lo ngumbuzo. Siye saqala ukuqala kwaye sele sitshitshiswe kwimpikiswano phakathi kokunqulo kunye phakathi kwamahlelo.
AmaYuda kunye nomyalelo wokuqala
Kuba amaYuda, ivesi leyesibili ngumyalelo wokuqala: NdinguYehova uThixo wakho, owakukhupha ezweni laseYiputa, endlwini yobukhoboka. Oku akuzwanga ngathi ngumyalelo omkhulu, kodwa kwimeko yesithethe samaYuda, enye. Yinto yesibini yobume kunye nesitatimende senzo: uthetha ukuba ukho, ukuba unguThixo wamaHebhere, kwaye ngenxa yokuba baphunyukile ebukhosini eYiputa.
Ngokwemvo, igunya likaThixo lixhomekeke kwinto yokuba uye wabancedisa ngaphambili - banomvuzo omkhulu kwaye uzimisele ukuba bangayikhohlwa. UThixo wamtshayisa inkosi yabo yangaphambili, uFaro owawuthathwa njengonkulunkulu ophilayo phakathi kwamaYiputa. AmaHebhere afanele aqonde ukutyala kwabo kuThixo aze amkele umnqophiso awayeza kwenza nabo. Imithetho yokuqala yokuqala, ngoko ke, ngokwemvelo ibandakanyeka ngozuko lukaThixo, isikhundla sikaThixo kwiimfundiso zesiHebhere, kunye nokulindela kukaThixo malunga nendlela abaya kumnxulumana ngayo.
Enye into efunekayo ekuphawuleni apha kukungabikho naluphi na ukunyanzeliswa kwi-monotheism apha. UThixo akavakalisi ukuba nguye onguye yedwa okhoyo; Ngokuchasene noko, amagama agxeka ubukho babanye onkulunkulu kwaye agxininise ukuba akufanele azinqule. Kukho inani leembhalo kwizibhalo zamaYuda ezinje kwaye ngenxa yokuba abaphengululi abaninzi bakholelwa ukuba amaYuda okuqala ayengabantu abanamathandabuzo kunokuba babekho oothixo: abanqula omnye uthixo ngaphandle kokukholelwa ukuba wabo nguThixo kuphela.
AmaKristu kunye noMyalelo Wokuqala
AmaKristu kuwo onke amahlelo aye awela ivesi lokuqala njengento yokuqala kwaye enze umyalelo wabo wokuqala kwindinyana yesithathu: Awunabanye oothixo phambi kwam. AmaYuda ngokuqhelekileyo ayifunde le ngxenye ( umyalelo wabo wesibini ) ngokwenene kwaye akhanyele ukukhonza kunqulo nawuphi na oothixo endaweni yawo. Ngokuqhelekileyo amaKristu awalandele kule nto, kodwa kungekho rhoqo.
Kukho isithethe esinamandla ebuKristwini bokufunda lo myalelo (kunye nokuthintela imifanekiso eqingqiweyo , nokuba ngaba kuthathwa njengomyalelo wesibini okanye kubandakanywa neyokuqala njengokuba kunjalo kumaKatolika namaLuthere) ngendlela engumzekelo. Mhlawumbi emva kokusungulwa kobuKristu njengenkolo ephezulu eWest kwakukho isilingo esincinane sokunqula nawuphi na oothixo bokwenene kwaye kwadlala indima. Kungakhathaliseki isizathu, nangona kunjalo, abaninzi banokuyichaza oku njengelungelo lokuthintela nantoni na into yokuba unqulo lukaThixo luphazamise kunqulo lukaThixo oyinyaniso.
Ngaloo nto inqatshelwe ukuba "unqulo" lwemali, isondo, impumelelo, ubuhle, isimo, njl. Abanye baye baphikisa ukuba lo myalelo uphazamisa omnye ukuba abe neenkolelo ezingamanga ngoThixo-mhlawumbi kwinqaba yokuba xa umntu ekholelwa ukuba uThixo unamanga ke ngoko, kukho, ukukholelwa kuThixo oyinyaniso okanye ongalunganga.
Nangona amaHebhere amandulo, kwakungekho nhlobo ingcaciso enjalo. Ngelo xesha i- polytheism yayinokhetho lokwenene olwenza isilingo esisoloko sisenza. Kubo, iifolthi yayiya kubonakala ingokwemvelo kwaye ingqiqo inikwe iindidi ezahlukeneyo zamandla angabonakaliyo abantu abaphantsi kolawulo lwabo. Kwaye iMithetho Eyishumi ayikwazi ukuphepha ukuvuma ukuba kukho kwamanye amagunya anokuthi abe ngumbumbano, efuna nje ukuba amaHebhere angabakhulekeli.
Uhlalutyo lomyalelo wesithandathu: awuyikubulala
Imvelaphi yeMithetho yeBlue kwiMelika
Usuku LukaValentine: Imvelaphi yezenkolo kunye neMvelaphi
IiPapa zeXesha lama-20
Ngaba uPetros wayengumPapa wokuqala?
Ngaba AbaPristi BamaKatolika Banokutshata?
Uluhlu lweAlfabhethi yamaPapa aKatolika
Umyalelo wesithoba: Uze Ungabi Nangqina Lobuxoki
Iintlobo zeGunya loNqulo
Umyalelo wesithoba: Uze Ungabi Ukuzihenyuza
Izizathu Zokuba Abantu Abakholelwa KuThixo Abakholelwa KuThixo
8 Izindlela ezilula zokunyamekela iiClubs zakho zeGalofu
IKhabinethi kaMongameli kunye nenjongo yalo
Imbali yeThelevishini kunye neCathode Ray Tube
I-Ytterbium Facts - Yb Element
Ingakanani loo Bhasi yebhasi?
10 Amanqaku Nge-Independence yaseTexas esuka eMexico
100 Iintlobo ezininzi eziqhelekileyo eziMntla eNtshona Melika: Umthi omnyama weCherry
Isigama magama ase-Orwell's '1984'
Biography ka Mata Hari
Iimviwo eziphambili kwiMbali ye-Renaissance
IJava Uluhlu Inkcazo kunye neMzekelo
MacGregor 26 I-Sailboat Amandla kunye nobuthathaka
I-Expository Essay I-Genre eneziphakamiso
Ziqhelise ekulungiseni iziPhosiso kwiSivumelwano -Sivumelwano seVesi
Kutheni AmaKatolika Athandaza Ngcwele?
Imidlalo yePomer yaseKhaya 101
I-US ivule njani iiPairings?
Yintoni iBhunga likaKhuseleko likaZwelonke elenzayo
I-Hot Weather Motorcycle Riding Gear
Eight Books Great About Mars
Imfazwe yaseAyn Jalut
Izinto eziMkhomba zoLwazi
Ngaba Abasetyhini Ababi?
Kuthetha ukuthini i-Heteronormativity?
IziXhobo zeSivakalisi: Bonisa i-Opposition kwisiNgesi esibhaliweyo